Muummichi Ministiraa humnaan mana murtiitti akka dhiyaatan gaafatame - BBC News Afaan Oromoo
Galmee obboo Gurmeessaa Ayyaanoo jalatti kan himataman hoggantoota paartii Kongirasii Federaalistii Oromoof (KFO)tiif ragaa ittisaa ta'anii akka dhiyaatan mana murtiin kan ajajaman qondaaltonni olaanoo mootummaa mana murtiitti osoo hin argamiin hafanii jiru.
Aanga'oota ragaa ittisaa ta'anii waamaman keessa tokko kan ta'an Ministirri muummee Itoophiyaa Obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny xalayaa waajjirri isaanii mana murtiif barreesseen hojiin waan itti baay'atuuf dhiyaachuu akka hin dandeenye eereera.
Abukaattoon himatamtootaa ministirri muummee ammatti dhiyaachuu hin danda'an yoo ta'e, beellamni akka qabamuuf, siruma hin danda'u jechuun garuu bu'uura seeraa akka hin qabne kaasuun yoo falman, dura taa'aa paartii kongirasii federaalistii Oromoo Obboo Baqqalaa Garbaa gama isaaniin Ministirri muummee poolisiin dirqiisiifamanii mana murtiitti akka dhiyaatan gaafatanii jiru.
Obbo Hayilamaariyaam akka nama dhunfaatti malee akka waamamaa mootummaatti miti kan waammanne waan ta'eef waajjirri isaanii deebii kennuu hin danda'u kan jedhan Obbo Baqqalaan, yoo argamuuf fedha hin qaban ta'e akkuma lammii tokkootti poolisiin qabamanii akka dhiyaatan gaafatanii jiru.
Ragaa ittisaa ta'uun kan waamaman aanga'oonni mootummaa kanneen akka Obbo Lammaa Magarsaa fi Obbo Abbaadulaa Gammadaa guyyoota lamaan hafan mana murtiitti dhiyaatu jedhamee eegama.
Haa ta'u malee, dhimma Muummicha Ministiraa humaan qabamanii akka ragaa ittisaatti mana murtiitti yaa dhiyaatan jedhu ilaaluuf waree boodatti beellama qabatulleen osoo hinkaasiin darbeera.
Akkasumas, himatamtoonni beellama waaree boodaatiif mana sirreessaa gahanii deebiiuu waan hindandeenyeef laaqana maatiin fideef nyaachuun akka eeyyamanuuf manni murtii ajajulleen qondaaltoonni mana sirreessaa akka hin nyaanyeef dhorkuun agabuu dhadhachatti deenii'uuf dirqamamu isaanii barameera.
Himatamtoota bakka bu'uun dhimma kana mana murtiitti kan iyyatan obbo Dajanee Xaafaa, yeroo uummatni Oromoo ajjeefamaa jirutti waa'ee nyaataa kaasuun keenya nutti dhagaahamullee namootni dhukkubsatan waan jiraniif mirgi keenya nuuf haa eeggamu jechuun dubbataniiru.
Ajajni mana murtees kabajamuu qaba jechuun gaafataniiru. Maatiin himatamtootaa nyaata qabatanii dhufan qabatanii deebi'uuf dirqamanii jiru.
Gama biraan galmeedhuma kana jalatti himatamaa 12ffaa kan ta'an Obbo Tasfaayee Liiban Tolosaa yeroo gara garaatti shiboo elektirikiin reebamuu dabalatee darara hamaa irra gahuun dirqisiifamanii sanada akka ragaatti irratti dhiyate mallatteessuu isaanii mana murtiitti iyyataniiru. Ragaan ittisaa dhiyeeffatanis kanuma mirkaneessanii jiru.
Kana malees, olmaa har'aasaatiin manni murtiichaa himatamtoota yakka shororkeessumman shakkamanii galmee Lulluu Massele jalatti himataman 7 yakkamtoota jechuun murtee kennee jira.
Himatamtoonni kunneen hedduun isaanii Naannoo uummattoota kibbaa magaalaa Arbaaminici kan qabaman yoo ta'an, dhaaba mootummaan shororkeessaa ittiin jedhu Ginboot Sabaat waliin hariiroo uumuun gocha shororkeessummaa raawwataniiru jedhamee itti murtaa'e.
Adabbii kennuufis ammoo Amajjii 8'tti beellamni qabameera.